गोर्खालीगमा चल्दैछ निष्कासित-निष्कासित खेलः प्रताप खाती पनि पार्टीबाट निष्कासित – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsगोर्खालीगमा चल्दैछ निष्कासित-निष्कासित खेलः प्रताप खाती पनि पार्टीबाट निष्कासित
दार्जीलिङः गोर्खालीग पार्टीमा निष्कासित-निष्कासित खेल चल्दैछ। गत केही दिनअघि मात्रै पार्टी महासचिव प्रताप खाती गुटले पार्टी अध्यक्षा भारती तामाङ, पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मण प्रधानलाई पार्टीबाट 3-3 वर्षको लागि निष्कासित गरेको थियो भने आज भारती तामाङ गुटले एक बैठक गरेर प्रताप खातीलाई सदाको लागि पार्टीबाट निष्कासित गर्यो। तर आज भारती तामाङ गुटले आफ्नो बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्न नसकेको गतिलै चाखको विषय बनेको छ।
गोर्खालीग अध्यक्षा भारती तामाङले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा प्रताप खातीले अवैध कब्जा जमाएको आरोप लगाएकी छन्, यसैले उनले आज प्रताप खाती विरूद्ध दार्जीलिङ सदर थानामा एक प्राथमिकी पनि दर्ता गरेको बताएकी छन्। यसैकारण आज पार्टीको साधारण सभा लाडेनला रोडस्थित पार्टी कार्यालयको साटो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा गर्नपरेको थियो।
यस बैठकपछि पत्रकारहरु लाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षा भारती तामाङले भनिन्-गोर्खालीग महासचिव प्रताप खातीले पार्टीलाई दोकान जस्तो चलाइरहेका छन्, पार्टीमा उनको एकलो दखल बेसी भयो। यसैकारण उनलाई पार्टीबाट सधैंको लागि निष्कासित गरिएको हो। यसबाहेक प्रताप खातीले गत 12 सेप्टेम्बरको दिन उत्तरकन्यामा भएको द्विपक्षीय वार्तामा भाग लिन गएका पार्टी प्रतिनिधिहरुको ज्यान लिनेसम्म धम्की दिएका थिए। यसैकारण पनि उनलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको हो।
यसैले अब पार्टीमा महासचिव पद तरूण गोर्खाका अध्यक्ष विप्लव राईलाई प्रदान गरिएको छ, जसलाई आगामी तीन महीनाभित्र पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक डाकेर केन्द्रिय समिति पुनर्गठन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ। पार्टी अध्यक्षा भारती तामाङ, पार्टी नेता लक्ष्मण प्रधान आदिको विशेष उपस्थितिमा आयोजित आजको बैठकमा 27 जना सदस्यहरु सामेल भएको पनि उनले बताइन्।
उनले अझै अघि भनिन्-प्रताप खातीले स्व. मदन तामाङको नाममा राजनीति नगरोस्। उनले स्व. मदन तामाङ अनि उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन कुनै भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। यस विषयलाई पहाड़का जनताले पनि बुझ्नपर्छ। गत 29 अगस्तको प्रथम द्विपक्षीय वार्तापछि राज्य सरकारले 12 सेप्टेम्बरको दिन दोस्रो वार्ता गरेको थियो। जसमा गोर्खालीगलाई पनि राज्य सरकारले निम्तो दिएको थियो।
उक्त निम्तो विषय लिएरनै गोर्खालीगले 11 सेप्टेम्बरको दिन एक आपतकालीन बैठक गरेको थियो, जसमा पार्टीले राज्य सरकारद्वारा डाकिएको वार्तामा भाग नलिने निर्णय लिएको प्रताप खाती गुटको दावी छ। तर अचानक 12 सेप्टेम्बरको दिन उत्तरकन्यामा भएको वार्तामा गोर्खालीगबाट4जना शीर्ष प्रतिनिधि उपस्थित भएको देखियो। जसमा पार्टी अध्यक्षा भारती तामाङ, पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण प्रधान, तरूण गोर्खा अध्यक्ष विप्लव राई, महासचिव पृथ्वीराज लिम्बु सामेल थिए। जसको फलस्वरूप पार्टी महासचिव प्रताप खातीको पहलमा भएको बैठकमा उपर्युक्त पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई पार्टीबाट केही समयको लागि निष्कासित गरिएको थियो।
यसपछि फेरि भारती तामाङहरुले गत 16 अक्टोबरको वार्तामा पनि भाग लिए, जसको विरोधमा पार्टीले भारती तामाङ, लक्ष्मण प्रधानलाई 3-3 वर्षको लागि पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो। यसको लगत्तैपछि आज भारती तामाङले पनि आफ्नो अध्यक्षतामा पार्टीको एक साधारण सभा डाकेर प्रताप खातीलाई सदाको लागिनै पार्टीबाट निष्कासित गरिएको घोषणा गरेकी छन्।
पक्राउ परेका नगरपार्षद भेन्टिलेटरमा